Maitiro ekusimbisa Instagram | e-commerce nhau
Instagram ndeimwe yemasocial network ari kuwedzera. Akaundi akawanda uye akawanda anogadzirwa mairi. Uye nguva zhinji, makambani, kana nyanzvi, dzinoda vashandisi kuti vaone account yavo seyepamutemo. Asi maitiro ekusimbisa Instagram?
Kana iwe uchiri kufunga kuti vanhu vane mukurumbira chete uye avo vane vateveri vazhinji vanogona kuzviita, iwe wakarasika. Chaizvoizvo, hongu unogona kuzviita uye isu tiri kuzokuratidza kuti sei.
1 Tarisa Instagram: iyo yebhuruu tiki inoita kuti iwe uve wakakosha
1.1 ko chikwekwe cheblue chakabvepi
2 Maitiro ekusimbisa yako Instagram account nhanho nhanho
2.1 Ndiani anogona kukumbira kuongororwa
2.2 Zvinodiwa kuti uonekwe
2.3 Nhanho nhanho kuti uone pa Instagram
3 Chii chinoitika kana ndikasatenderwa kuongorora
4 Chii chinoitika kana ndikasimbiswa
4.1 Uye ndinogona kupotsa bhuruu here?
Tarisa Instagram: iyo yebhuruu tiki inoita kuti iwe uve wakakosha
Sezvaunoziva, uye kana tikasakuudza izvozvi, iyo yebhuruu tick pa Instagram inoratidza kuti account yakasimbiswa. Ndiko kuti, ndiyo account yepamutemo. Kusvika nguva pfupi yadarika izvi zvakashanda kusiyanisa vashandisi veakaunti yeakakurumbira mumasocial network, uye chikonzero nei iwe uchikwanisa. siyanisa nhoroondo yepamutemo yemukurumbira kubva kune idzo dzinofungidzirwa kuva dzenhema.
Nekudaro, ikozvino iyo yekusimbisa yakavhurika kune vashandisi. Isu hatisi kuzokuudza kuti iri nyore maitiro, asi zvirinani une mukana wekuyedza.
ko chikwekwe cheblue chakabvepi
Chinhu chinozikanwa nevashoma ndicho ichocho iyo yebhuruu yekusimbisa tiki haina kubva ku Instagram, asi inoenderana ne Twitter. Pakatangwa iyi social network, vanhu vazhinji vane mukurumbira vakatanga kuishandisa kuti vakwanise kutaura nevateveri vavo vese. Asi panguva imwecheteyo, kwaivewo nevazhinji scammers vakagadzira maakaundi mumazita evakakurumbira kuti vatambe pranks kana kubiridzira.
Kugadzirisa dambudziko iri, Twitter yakagadzira iyo "blue tick" yaive yekusimbisa yekuzivikanwa kweaccount nenzira yekuti iwe wakapa chokwadi uye kuvimba kune iyo account pamusoro pevamwe vese..
Neizvi, vashandisi vaigona kuziva kuti ndeapi maakaundi aive epamutemo uye ndeapi emanyepo kana asingaenderane neakakurumbira (kana zvirinani iwe haugone kuve nechokwadi nazvo 100%.
Nekudaro, Twitter yaive yekutanga social network iyo yakabvumira maakaundi kuti asimbiswe, chimwe chinhu chaive chisipo mune mamwe ma network. Kunyange zvazvo isina kutora nguva kuikopa.
Muchokwadi, iyi yakasimbiswa account yeblue tick yanga ichienderera kubva 2014, uye chokwadi ndechekuti Haisi nehuwandu hwevateveri, kushandiswa kwema hashtag, huwandu hwemukati… chii chinotarisa kuti vanokupa iwe, asi kuti inogona kuwanikwa kunyangwe account yako idiki kana ukasangana nezvinodiwa.
Maitiro ekusimbisa yako Instagram account nhanho nhanho
Iwe unoda kuziva nzira yekusimbisa Instagram? Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti zviri nyore kuzviita. Hongu zvirokwazvo, kubva kune mobile application. Pane imwe nzira kubva padesktop isiri pfungwa yakaipa kana, asi zvakanakisa kuti iwe unogara uchizviedza nenharembozha yako.
Ndiani anogona kukumbira kuongororwa
Kana iwe usingazive, izvozvi chero munhu anogona kukumbira kuongororwa. Kwete chete vane mukurumbira kana vapesvedzera.
Iwe haufanirwe kunge uine hushoma nhamba yevateveri, asi iwe unofanirwa kuve uine pikicha yemufananidzo uye inokwana imwe post.
Zvinodiwa kuti uonekwe
Kana iwe uchida kuona yako Instagram account, iwe unofanirwa kuita zvinotevera zvinodiwa:
Sangana nemamiriro ezvinhu yekushandiswa uye tsika dzenharaunda (hongu, iro gwaro ratisina kumboverenga).
Izvozvo account yako inomiririra munhu chaiye, kambani kana mubatanidzwa.
Akaunti yako inofanirwa kuve yakasarudzika kune iye munhu kana bhizinesi.
Ita kuti zvive pachena uye uve nemharidzo yako, mufananidzo wepikicha uye chinyorwa.
Izvi hazvizofanotaura kuti iwe uchave wakasimbiswa, asi zvirinani iwe unosangana nezvinodiwa.
Nhanho nhanho kuti uone pa Instagram
Hezvino iwe une matanho aunofanira kutora:
Kutanga, enda kune Instagram app. Ikoko, iwe unofanirwa kuenda kune yako mbiri (pazasi kurudyi icon).
Mune iyo profil uchaona mitsetse mitatu yakatwasuka. Iyi inonzi "hamburger menyu" uye ipapo unofanira kudzvanya paAccount Settings.
Pasi pe "Akaunti" une mutsara wekuti "Kumbira Kuongororwa". Dzvanya ipapo.
Instagram inozokumbira kuti uwedzere zita rako rekutanga nerekupedzisira, gwaro (pano rinokupa akati wandei sarudzo).
Pazasi, zvinokutendera kuti usimbise kukosha kwako, ndiko kuti, kuti mukurumbira wako unowira pasi ripi, nyika kana dunhu, uye nesarudzo vateereri vako nemamwe mazita aunozivikanwa nawo.
Chekupedzisira, muZvibatanidza, une sarudzo yekuwedzera zvinyorwa zvinoratidza kuti account yako inofarira veruzhinji. Unogona kuwedzera 3, asi ukapa Add link unokwanisa kuisa mamwe akawanda.
Zvese zvaunofanirwa kuita kurova bhatani rekuti "Send" uye kumirira mazuva makumi matatu kuti vapindure. Vazhinji vanoti mumazuva mashoma iwe uchava nazvo, asi zvese zvinoenderana, hongu.
Chii chinoitika kana ndikasatenderwa kuongorora
Sezvatakambokuudza, kuti unozadzisa zvese zvinodiwa uye kuti unozadza ruzivo rwese rwavanokumbira hazvirevi kuti vachakupa chikwekwe cheblue chinodiwa nemunhu wese. Zvingava nyaya yekuti vanokuramba.
Ndoita sei ipapo? Chokutanga, ramba wakadzikama. Nekuda kwekuti chikumbiro chako charambwa hazvirevi kuti hauchakwanisi kuedza zvakare. Muchokwadi, unogona kuedza rombo rako zvakare mumazuva makumi matatu, kuti uone kana vakachinja pfungwa dzavo.
Munguva iyoyo, tinokupa zano kuti ushande paakaunti yako uye, pamusoro pezvose, kuzvikurudzira kuti uwane kubatana (kubvunzurudza, zvinyorwa zvepepanhau, nezvimwewo) kuti ukwanise kuvatumira mimwe mienzaniso yekuti chimiro chako chakakosha uye kuti ivo varivo. ndichikutsvaka.
Chii chinoitika kana ndikasimbiswa
Kana mushure menguva iyoyo iwe ukaona kuti une yebhuruu tick muakaundi yako, makorokoto! Izvi zvinoreva kuti iwe wakakosha uye kuti Instagram yakazviona, ndosaka yakupa iwe.
Ehe, izvi hazvireve kuti iwe uchave nemabhenefiti akawanda kupfuura vamwe, asi kuti, pamberi pevashandisi, ivo vanozoona kuti chimiro chako ndicho chepamutemo uye chechokwadi, nokudaro vachidzivirira vamwe kuti vasanyepedzera kuva iwe.
Kupfuura izvozvo, hapana akawanda akawanda mabhenefiti.
Uye ndinogona kupotsa bhuruu here?
Chokwadi ndechekuti hongu. Asi kana ukairasa, imhaka yekuti warasa kuverenga, ingave nekuti yakaremara, nekuti wakatyora Instagram mitemo kana nekuti yakabviswa. Kana izvo zvikaitika iwe uchafanirwa kuedza kudzoreredza account yako uye kutevedzera kuitira kuti verification idzoke.
Wakajeka pane nzira yekusimbisa Instagram? Wakambozviita here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Maitiro ekusimbisa Instagram